बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ , हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? - Experience Best News from Nepal
बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ , हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
आज बुधबार अमेरिकी डलरसहित धेरै देशको मूल्य सामान्य रुपमा बढेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ७९ पेसा रहेको छ भने बिक्रिदर १ सय ११ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४४ रुपैयाँ ९७ पैसा, बिक्रिदर १ सय ४५ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४३ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २६ रुपैयाँ ७१ पैसा छ भने बिक्रिदर २६ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६४ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ६६ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९३ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर २ सय ९५ रुपैयाँ ४६ पैसा रहेको छ।
सहकारीलाई थप कडाई गर्ने नयाँ कानुन आयो, हेरौ प्रावाधान के रहेछ !
१० लाखदेखि ५ करोडसम्म ऋण चाहिए राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ३.३३% मै दिने, शर्त सहित !
कति छ आज फागुन १ गते डलरदेखि कतारी रियालसम्मको विमिमयदर ?